जिवितै रहेका हजुरआमा, र आमाबुवालाई मरिसके किन भने यि युवाले ? के रहेछ त्यस्तो बाध्यता ? (भिडियो हेर्नुस्) « Light Nepal
Published On : 19 March, 2019 10:54 pm
काठमाडौं । काठमाडौंको भृकुटिमण्डपमा रहेको एउटा क्याफेमा वेटरको काम गर्ने सुनिल लिम्बुले आफुले झुट बोलेको भन्दै सबैसंग माफि मागेका छन् । एक दिन अघि उनले लाइट नेपालको युट्युव च्यानलमा अन्तरवार्ताका क्रममा आफ्नो आमाबुवा र हजुरआमा समेत नभएको भनेर अन्तरवार्ता दिएका थिए । एउटा खुट्टाको सहारामा अर्काको क्याफेमा मजदुरी गरेर जिवन चलाएका सुनिलको गज्जवको कला छ ।
उनी पेन्टिगं गर्छन भने अभिनय पनि राम्रो गर्छन । उनको यो कलालाई प्रोत्साहन दिन र त्यसका लागि सहयोग जुटाउन लाइट नेपालले उनीसंग अन्तरवार्ता लियो । उनले सबैको सहानुभुती पाउन मिडियामा झुट बोले । तर झुट धेरेबेर टिक्दैन । जसै अन्तरवार्ता प्रशारण भयो त्यो अन्तरवार्ता लिने प्रस्तोतालाई तारन्तार उनका आफन्तको फोन र म्यासेज आयो । उनले त जिवितै रहेकी हजुरआमालाई मृत्यु भइसकेको भनेर बताएका थिए । घरमै भएका आमाबुवाको बारेमा पनि थाहा नभएको र सम्झना समेत नभएको बताएका थिए ।
तर वास्तविकता उनले बताए जस्तो रहेनछ । उनका आफन्त, साथीभाई, आमाबुवा, हजुरआमा लगायत दाजुभाई दिदीबहिनी सबै रहेछन् । तर सुनिलले किन त्यस्तो भने त रु हामीले फेरी त्यो कुरा जान्न उनीसंग कुराकानी गर्न गयौं । उनले काम गर्ने क्याफेमा निकै भिड थियो । हामीले उनको वास्तविकता थाहा पायौं भन्ने कुरामा उनलाई शंका पनि थिएन । तर एक्कासी तिमीले हामीसंग अन्तरवार्तामा किन झुट बोलेको भनेर सोधेपछि भने उनी अक्क न बक्क परे । उनले यो अन्तरवार्तामा आफु काठमाडौं आएदेखिको आफ्नो संघर्षको कथा र झुट बोल्नु परेको बाध्यता पनि बताएका छन् । उनले अन्तरवार्तामा मात्र होइन जुन क्याफेमा काम गरेका छन् त्यो क्याफेका संचालकलाई पनि आफु एक्लै हो भनेर बताएका रहेछन् । त्यस पछि उनले के जवाफ दिए त हेरौं यो भिडियोमा
बिष्णु माझी र वद्री पंगेनीको स्वरमा ‘मान्छे फकाएर आफ्नो हुँदैन’ सार्वजनिक (भिडियो हेर्नुस्)
काठमाडौं, ६ वैशाख । नेपाली लोक तथा दोहोरीको क्षेत्रमा आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाईसकेका दुई कलाकार